သွယ်လျပြီး သရုပ်ဆောင်ပီပြင်ပိုင်နိုင်တဲ့ Luo Yunxi ကတော့ ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းတွေတင်မကဘဲ ခေတ်ပေါ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့လည်း လွန်စွာလိုက်ဖက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Luo Yunxi ရဲ့ Ro ဆန်ဆန် ခေတ်ပေါ်ဇာတ်လမ်းကို စောင့်နေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် “Lie to Love” ဆိုတဲ့ Romantic Drama ကတော့ စောင့်ကြိုနေပါပြီ။
မင်းသားချော Luo Yunxi နဲ့ ပရိသတ်ကြားနာမည်ရလာသူ အဆိုတော် – သရုပ်ဆောင် Cheng Xiao ဟာ အချစ်ဇာတ်လမ်းမှာပဲ ပေါင်းစည်းခဲ့ကြပါတယ်။ “Lie to Love” ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အားလုံးကြိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းပုံစံမျိုးပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ်ကို ပြောရရင်… Li Ze Liang (Luo YunXi) ကတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လွတ်လပ်စွာနေတတ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးရဲ့ အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်။ Su Xie Yi (Cheng Xiao) ကလည်း ရွှင်ပြတက်ကြွတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။
နှစ်ယောက်သား ချစ်သူစုံတွဲတွေဖြစ်သွားကြပြီး ဘဝအတွက် အပျော်ရဆုံးနေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းနေချိန်မှာပဲ Su Xie Yi ရဲ့ မိသားစုဘဝဟာ ပြိုကွဲပျက်ဆီးသွားခဲ့တဲ့အတွက် ရည်းစားဖြစ်သူနဲ့လည်း ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အဖြစ်အပျက်အားလုံးဟာ ချစ်ခဲ့ဖူးသူ Li Ze Liang ကြောင့်ပဲဆိုပြီး သံသယဝင်လာပြီးတဲ့နောက် အမှန်တရားကို စုံစမ်းဖို့ အကြံထုတ်ပါတော့တယ်။ Su Xieyi ဟာ အတိတ်မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး Li Ze Liang ကို တဖန်ချဉ်းကပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းချင်း စုံစမ်းတဲ့အခါမှာပဲ သူမရဲ့ချစ်သူအပေါ် လုံးဝ အထင်လွဲနေမှုကို တဖြည်းဖြည်း သိလာရတော့တာပါပဲ။
နှစ်‌ယောက်သား ချစ်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ relationship ကို အဖတ်ဆယ်နိုင်ပါ့မလား? အတိတ်မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ Su Xieyi ကို သူဌေးသားက ဘယ်လိုတွေ တယုတယလုပ်ဦးမလဲ? အဖြစ်မှန်ကို စုံစမ်းရင်း သူတို့ကြားက အချစ်တစ်ခုက ပြန်လည်နွေးထွေးလာပါ့မလား? ဆိုတာကို ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရပါတော့မယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ Yunxi နဲ့ Xiao လေးတို့ရဲ့ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်မှုကို စောင့်စားနေကြပါတယ်။ Luo Yunxi နဲ့ Cheng Xiao တို့ရဲ့ ပထမဆုံးတွဲဖက်မှုဟာ ပရိသတ်တွေ အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျမလားဆိုတာကတော့ ထွက်ရှိလာရင် သိရတော့မှာပါ။
“Lie to Love” ကတော့ လက်ရှိပြသနေတဲ့ A Female Student Arrives At The Imperial College ပြီးရင် ထုတ်လွှင့်ပြသမယ့်အကြောင်း ကြေညာထားတာဖြစ်လို့ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Next “The King’s Affection” နန်းတွင်းကားအတွက် SuperJuinor အဖွဲ့ခွဲ “K.R.Y"သီဆိုထားတဲ့ ကြေကွဲစရာ အချစ်တေး »
Previous « Taylor Swift ကို​ ကျော်တက်ပြီး Billboard သမိုင်းတစ်​​လျှေုာက် အမြင့်ဆုံး စံချိန်သစ်တင်လိုက်တဲ့ BTS